Indawo Yokulondoloza Umdlalo Wezemvelo - I-Nandi House - I-Airbnb
Indawo Yokulondoloza Umdlalo Wezemvelo - I-Nandi House
Giants Castle Game Reserve, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-ZuluWaters
Ngaphakathi kwe-Game Waterers Reserve, uzothola i-Nandi House. Indlu enhle yokuziphekela ebekwe ezintabeni ezinkulu ze-Dakensberg, ebheke izintaba eziseningizimu. Impilo yasendle, ukudoba, ukushayela imidlalo nokuningi konke endaweni yakho yokulondoloza imidlalo yangasese.
Vuka uye endaweni enhle ukusuka e-veranda yakho ngokubuka izilwane zasendle
Sinamakamelo okulala amabili athandekayo anemibhede emikhulu. Kodwa kufanele kuphawuleke ukuthi udonga oluphakathi kwamakamelo okulala lulula futhi uzokwazi ukuzwa umuntu okwelinye ikamelo.
Indawo Yokugcina Umdlalo wamanzi aseZulu ikunikeza ukusetshenziswa okukhethekile kwezakhiwo zayo ezingamahektare angu-3000, isikhathi sakho lapha senzelwe ukwakha okokuzithokozisa okufunayo eNingizimu Afrika. Ehlelwe emagqumeni angenabungozi bezintaba zase-Dakensberg e-KwaZulu-Natal ngemoto yamahora angu-2 kuphela ukusuka eThekwini
Indawo Yokugcina Umdlalo Wamanzi Esizulwini ithembisa okokuzithokozisa okusondelene ngokukhethekile nehlane lase-Afrika. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuthatha ukugibela ihhashi usondelene nomuntu siqu emgodini we-wildebeest kanye ne-buffalo noma inhlanzi ye-trout yasendle emfuleni ongu-8km we-Bushman 's River, ukuhlanganiswa kwamanzi okukhethekile nokuzijabulisa kwenza okokuzithokozisa kwase-Afrika ngokungafani nanoma yikuphi okunye. Labo abachitha isikhathi e-Zulu Waterers Private Reserve bashiywe benomqondo wokuthi okuthile kubo sekushintshile – mhlawumbe bagcwaliseke kakhudlwana - bakhuthazeke kakhudlwana.
Imvelo ejabulisayo nezilwane zasendle endaweni yokulondoloza imidlalo yangasese,
Ukuzizwa kobumfihlo nomoya ohlanzekile
Umphathi wethu osemsebenzini uzotholakala noma nini lapho kudingeka futhi akwamukele endaweni yethu yokulondoloza imidlalo yangasese
Hlola ezinye izinketho ezise- Giants Castle Game Reserve namaphethelo